BBC oo ku dhawaaqday guuleystaha abaal marinta xiddiga sanadka ee qaarada Afrika, (Xidigee ayaa loo caleemo saaray?) – Gool FM
BBC oo ku dhawaaqday guuleystaha abaal marinta xiddiga sanadka ee qaarada Afrika, (Xidigee ayaa loo caleemo saaray?)
Dajiye December 15, 2018
(Afrika) 15 Dis 2018. Warbaahinta caalamiga ah ee BBC ayaa ku dhawaaqday guuleystaha abaal marinta xiisaha badan ee xidiga sanadka qaarada Afrika.
Laacibka kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Masar ee Mohamed Salah ayaa loo caleemo saaray ciyaaryahankii ugu fiicnaa qaaradeena Afrika sanada 2018, taasoo ay gudoonsiisay idaacada BBC.
Waa markii labaad xiriir h uu Mohamed Salah ku guuleysanayo abaal marintan, kadib markii uu sidoo kale sanadkii lasoo dhaafay kusoo guuleystay.
Mohamed Salah ayaa noqday ciyaaryahankii labaad ee tan iyo markii la bilabay bixinta abaal marintan ee sanadkii 1992 ku guuleystay 2 jeer ee xiriir ah, kadib xidiga ree Nigeria ee Jay-Jay Okocha.
Mohamed Salah ayaa haatan sidoo kale noqday ciyaaryahankii saddexaad ee reer Masar ah ee loo caleemo saaray abaal marinta ciyaaryahanka ugu fiican afrika, kadib Mohamed Barakat iyo Mohamed Aboutrika oo kusoo kala guuleystay 2005 iyo 2008 sida ay u kala horeeyaan.
Mohamed Salah ayaa wuxuu abaal marintan ku garaacay xidigo ay ka mid yihiin Sadio Mane, Kalidou Kolibaly iyo Mehdi Benatia.
Si kastaba Mohamed Salah ayaa haatan hogaaminaya gooldhalinta horyaalka Premier League, ka dib markii uu dhaliyey 10 gool ilaa iyo haatan, wuxuuna sidoo kale sabab buuxda u noqday in Liverpool ay gaarto finalka Champions League xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
HORDHAC: Inter Milan v Udinese
Modric oo ka hadlay sababta ka dambeysa hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedkiisa xili ciyaareedkan